Impembelelo yesiqholo kubuntu bethu kunye nokukhetha kwayo | Amadoda aQinisekileyo
Amafutha ngokobuntu bakho
Kwamanye amadoda, khetha isiqhumiso Ngumsebenzi olula: bayazama, bayayithanda kwaye yiyo loo nto. Kwabanye, akukho lula kangako.
Ngapha koko, usebenzisa ivumba Ibonakalisa ubuntu bethu, njengendlela esidibanisa ngayo iimpahla, indlela esihamba ngayo okanye ukuhambahamba esidlangalaleni.
1 Amafutha kunye nesiqholo ngokobuntu bendoda
2 Ngaphaya kobuntu
Amafutha kunye nesiqholo ngokobuntu bendoda
Amadoda aphumayo awanangxaki ngokuma ngaphandle. Isiqholo sakho sinokuma kakuhle ngaphezulu kwezinye.
Banomdla kwi iziqholo eziqatha, ezineentyatyambo, i-lavender okanye izinto ze-citrus. Ngendlela efanayo, amanqaku e-vanilla adityaniswe namavumba enkuni awayi kuqatshelwa.
Kunoko, oyena mntu ungenisayo bafuna ukwenza uphawu lwabo, kodwa ngaphandle kwengxabano. Iziqholo eziziingqondi, eziphuma kumanqaku aphantse angabonakali, kodwa kwangaxeshanye angalibalekiyo, zezona ziqhelana neli qela.
Zihlala zinomdla ulwandle, igudileyo kunye namavumba angapheliyo, ezinikela intuthuzelo. Ukulingana ngokugqibeleleyo phakathi kokulula kunye nobudoda.
Los amadoda azenzekelayo, abo baphila ubomi ngokuzolileyo, kodwa ngaphandle kokuma kuyo nantoni na, Zidibanisa iiaroma kunye neentyatyambo kakuhle.
Abathandi bezemidlalo ixesha elininzi babonisa amandla kunye nobungqabavu obonakala ngathi abupheli. Ngenxa yoko, iziqholo zabo abazithandayo zihlala zakhiwe ngesiseko se-citrus, kunye nezinto ze-terrarium ezinje nge-moss, ipineyini okanye isilumko.
Kuyimfuneko ukuba ube Iimpawu eziqinisekisa ukuzinza Ivumba elimnandi, ngaphandle kokubila rhoqo.
I-WHO baphila ngokuthandana kunye nothando, Zidibanisa kakuhle nesiqholo iHyacinth, i-lavender okanye iorenji eziqhakazayo. Kulabo bahambisa umlilo, isafron kunye nepepile emnyama basebenzela ukunyusa amaqondo obushushu. Kubugcisa bokukhohlisa, i-bergamot kunye neeplum zizinto ezimbini ezingalinganiyo.
Xa ujonga isincoko esimnandi, kukho inkcukacha ebalulekileyo ekufuneka uyithathele ingqalelo. Akufanele ukhethe uphawu lweoli yobulawu ngenxa yevumba elivela komnye umntu. Ivumba lomzimba linje ngeminwe yeminwe: akukho zimbini ziyafana.
Imithombo yemifanekiso: Eyona ilungileyo.top / YouTube
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Amafutha ngokobuntu bakho
Ijee ezintandathu ezinesitayile sokuwa oku
UZara ubheja ngozinzo kuhlelo lwayo lwamva nje